IiNdumiso Chapter99 1 UYehova nguKumkani, ziyagungqa izizwe; Ulohlala ekerubhini, liyashukuma ihlabathi. 2 UYehova mkhulu eZiyon; Uphakamile ngaphezu kwezizwe zonke. 3 Baya kulibulela igama lakho elikhulu eloyikekayo; Ngokuba ungcwele yena. 4 Amandla okumkani athanda okusesikweni; Uwazimasile wena ngokuthe tye; Wenze okusesikweni nobulungisa kwaYakobi wena. 5 Mphakamiseni uYehova, uThixo wethu, Niqubude esitulweni seenyawo zakhe; Ngokuba ungcwele yena. 6 OoMoses noAron phakathi kwababingeleli bakhe, NoSamuweli phakathi kwabalinqulayo igama lakhe, Baye bebiza kuYehova, wabaphendula yena. 7 Wathetha kubo esemqulwini welifu; Bazigcina izingqino zakhe, Nommiselo awabanika wona. 8 Yehova, Thixo wethu, wabaphendula wena, Waba nguThixo oxolelayo kubo, Ongoziphindezelayo iintlondi zabo. 9 Mphakamiseni uYehova, uThixo wethu, Niqubude entabeni yakhe engcwele; Ngokuba ungcwele uYehova uThixo wethu. [ Prev ]